नेपाल आइडल विवाद मुख खोले न्ह्यू बज्राचार्यल - गसिप - साप्ताहिक
नेपाल आइडल विवाद मुख खोले न्ह्यू बज्राचार्यल
यतिबेला नेपाली टेलिभिजनका दर्शकहरू गायनमा आधारित रियालिटी शो ‘नेपाल आइडल’ तर्फ आकर्षित छन् । नेपालगन्ज, बुटवल, नारायणगढ, वीरगन्ज, विराटनगर तथा काठमाडौंमा सम्पन्न भएका अडिसनका दृश्यहरू प्रसारण भैसक्दा यो कार्यक्रमले आलोचना पनि सहनुपरेको छ । खासगरी सामाजिक सञ्जालमा निर्णायकका मत दर्शकहरूले रुचाएको पाइँदैन । यही प्रसंगमा उक्त कार्यक्रमका मुख्य निर्णायक तथा संगीतकार न्ह्यू बज्राचार्य के भन्छन् त ? बज्राचार्यका भनाइ उनकै शब्दमा :
अमेरिकन आइडल होस् अथवा इन्डियन आइडल, यस्ता प्रतियोगितामा आलोचना र विरोध त हुन्छ नै, हामी तीनै जना निर्णायक त्यसका लागि पहिलेदेखि नै तयार थियौं । फुटबल खेलमा रेफ्रीको आलोचना नभएको घटना सायदै होला । यो पनि त्यस्तै हो । हाम्रो निर्णयको आलोचना, विरोध तथा नकारात्मक टीका–टिप्पणी हुन्छ भन्ने अनुमान हामीलाई थियो, किनभने यो एउटा प्रतियोगिता हो । सबैलाई आफ्नो मान्छेले जितेर अघिल्लो चरणमा प्रवेश गरोस् भन्ने चाहना हुन्छ ।
संगीतमा मेरो झन्डै ३०–३१ वर्षको अनुभव छ । मैले विभिन्न पुस्ताका गायक–गायिकाहरूसँग काम गरेको छु । यो तीन दशकको अवधिमा मैले अनुभव गरेको कुरा के हो भने संगीतको शैली हरेक पुस्तामा परिवर्तन हुँदै जान्छ । हामीले संगीत सिक्दा जुन सांगीतिक वातावरण थियो, त्यो अहिले छैन । परिवर्तनशील संगीतलाई सधैं एउटै चस्मा लगाएर हेर्नु हुँदैन । हरेक पुस्ताका संगीतकर्मीले आफ्नै शैलीको संगीत सिर्जना गरिरहेका हुन्छन् ।
हामीले अडिसनका क्रममा राम्रो मान्छे नै छान्ने प्रयास गरेका छौं । गीत गाउने भनेको भावना व्यक्त गर्ने हो । सुर र तालको कुरा त छँदैछ, तर गीत गाउने व्यक्तिले सुन्ने व्यक्तिको मनसम्म आफ्नो भावना पुर्‍याउनैपर्छ, तब मात्र ऊ वास्तविक गायक–गायिकाका रूपमा स्थापित हुन्छ, तर यसो भन्दैमा सुर–तालमा नगाउने मान्छे पनि माथि आउन सक्दैन ।
मेरो व्यक्तिगत निर्णयमा कुरा काट्ने काम भएको छ । मैले प्रतिस्पर्धीहरूलाई ‘तपाईं’ नभनी ‘तिमी’ भनेको आरोप लागेको छ । मलाई नेपाली भाषा बोल्न आउँदैन भन्ने आरोप पनि छ । मलाई के लाग्छ भने नेपालमा विभिन्न भाषाभाषी छन् र सबैलाई उत्कृष्ट शैलीमा नेपाली भाषा बोल्न आउँछ भन्ने छैन । म भाषालाई अभिव्यक्त गर्ने माध्यमका रूपमा मात्र लिन्छु । यद्यपि मैले बोलेको नेपाली भाषा दर्शकले बुझेका छैनन् भन्ने मलाई लाग्दैन । भाषाप्रति यति संकुचित सोच राखिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । नेपालमा जति पनि भाषा बोलिन्छ ती सबै राष्ट्रिय भाषा हुन् । भाषाकै कारण मैले कसैलाई होच्याएको छैन । हाम्रो सांगीतिक क्षेत्रमा यसै पनि तपाईंभन्दा तिमी शब्दकै प्रयोग बढी गरिन्छ । गीतहरूमा तपाईंभन्दा तिमी शब्द नै प्रयोग हुन्छ । त्यसबाहेक मलाई ‘तिमी’ भनेर सम्बोधन गर्दा अझ बढी आत्मीयता झल्कन्छ जस्तो लाग्छ ।
मुख्य समस्या के होला जस्तो लाग्छ भने हामी अडिसनका लागि नेपालगन्ज गयौं । त्यहाँ संगीत सिक्ने ठाउँको अभाव छ । पोखराको तुलनामा हामीले नेपालगन्जमा राम्रो गाउन सक्ने प्रतिभा कम फेला पार्‍यौं । स्रोत र साधनको अभावमा समेत आफ्नै मेहनतका कारण राम्रो प्रस्तुति दिएका नेपालगन्जबाट हामीले जसलाई छनौट गरेका छौं, त्योभन्दा राम्रो गाउने पोखरा अथवा बुटवलको प्रतिभा छनौट नभएको हुनसक्छ । नेपालगन्जमा राम्रो गाउनेको कमी भयो भने पोखरा र बुटवलमा राम्रो गाउने प्रतिभा धेरै भए । त्यसैलाई लिएर कतिपयले त्यति नराम्रो गाउने छनौट भयो, यति राम्रो गाउने प्रतिभाचाहिं छनौट भएन भनेर टिप्पणी गरे । यस्तो परिस्थितिमा हामी केही गर्न सक्दैनौं ।
बुटबलको अडिसनपछि राम्रा–राम्रा प्रतिभाको आगमन हुन थाल्यो । त्यसपछि हामी निर्णायकलाई निर्णय गर्न केही गाह्रो पनि हुन थाल्यो । औसतभन्दा राम्रो गाउनेहरूको संख्या बढी भएपछि स्वभाविक रूपमै सबैभन्दा राम्रो गाउनेले मौका पायो ।
हामीले अडिसनबाट १ सय ५१ जना प्रतिभा खोजेर ल्याएका छौं । हामीले बुटवलदेखि पूर्व लागेपछि नेपाल आइडल हुने सम्भावना बोकेका प्रतिभाहरू फेला पार्न थाल्यौं । काठमाडौंको अडिसन अझ बढी टफ थियो, किनभने काठमाडौं देशभरिका मानिस आएर बसोबास गर्ने थलो हो । काठमाडौंको अडिसनबाट त यस्ता प्रतिभा आए जो नेपाल आइडल नभए पनि स्थापित व्यवसायिक गायक–गायिका हुन सक्छन् ।
व्यवसायिक गायक–गायिकाहरूको सम्भावनालाई बुझेर हामीले प्रशस्त मौका पनि दिएका थियौं । त्यत्तिकै फाल्नु हुन्न भनेर म आफैंले गिटार बजाएर समेत गाउने मौका दिएको हुँ तर त्यो ठाउँमा आएपछि प्रस्तुति दिनै नसक्नेहरू पनि देखियो । प्रतियोगितामा सबैले जित्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । प्रतियोगिता भन्नेबित्तिकै जित र हारको कुरा आइहाल्छ । सबैले जित्ने हो भने त त्यो प्रतियोगिता नै भएन नि ?
मैले कहिल्यै र कसैलाई पनि जात, लिंग, भाषा, स्थानका आधारमा भेदभाव गरेकै छैन । म त केवल संगीतको भाषा मात्र बुझ्छु । यदि कुनै प्रतियोगीमा कलाकार बन्न सक्ने क्षमता छ, कलाकारका रूपमा अघि बढ्न सक्ने खुबी छ भने उही नै अघि बढ्ने हो । मैले केवल त्यही कुरामात्र मूल्यांकन गरेको हुँ ।
जे भए पनि यो कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि जुन कलाकारले नेपाल आइडलको उपाधि जित्छ, ऊ वास्तवमै पक्का कलाकार भएर निस्कनेछ । त्यसमा कुनै शंका छैन ।